अन्तरजातिय विवाह गरेकी लक्ष्मी वर्देवा लेख्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा मुटु काम्दो रहेछ’ – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/अन्तरजातिय विवाह गरेकी लक्ष्मी वर्देवा लेख्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा मुटु काम्दो रहेछ’
अन्तरजातिय विवाह गरेकी लक्ष्मी वर्देवा लेख्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा मुटु काम्दो रहेछ’
9,5582minutes read
कलाकार लक्ष्मी वर्देवाले गत साल प्रेमी जीवन भट्टराईसँग अन्तरजातिय विवाह गरिन् । आफ्नो अन्तरजातिय प्रेम विवाह बारे खुलेर कुरा गर्ने लक्ष्मी जाजरकोटमा अन्तरजातिय प्रेम र विवाह प्रयासपछि नवराज विकको हत्या खबरले भने झस्किएकी छिन् । यो खबर बाहिरिएदेखि उनको मनमा शान्ति छैन् । जातकै कारण हत्यासम्म गर्ने नेपाली समाजप्रति लक्ष्मीको मनमा घृणा पैदा भएको । लक्ष्मी वर्देवाको यो आक्रोशपुर्ण लेख पढ्नुस् ।
लेख्ने, भन्ने कुरा कैयौं भए पनि यस्तो अवस्थामा हातहरु काम्दो रहेछ । तर डरले होइन, घृणाले । रुकुममा हालै भएको घटना पढेपछि मैले कैयौं पटक आफैलाई प्रश्न गरे “मान्छे भएर मान्छेलाई कुटपिट गरेर हत्या नै गर्न ती आपराधिक मानसिकतालाई के कुराले प्रेरित गर्यो होला ? जातले ? हुन त यो न पहिलो घटना हो र दुःखको कुरा न मैंले चाहेर यो अन्तिम नै हुनेछ । प्रेमले त संसार जितिन्छ भन्ने कुरा त पढ्न मात्रै पो मजा आउने रहेछ । यहाँ त सजाए “मृत्युु दण्ड“ थियो र अपराध “प्रेम“ ! जातिय विभेदको यो भन्दा पराकाष्ठा के हुन सक्ला र ? अझ जब थाहा हुन्छ कि समाज सुधारक भनौदाहरुले यस्ता अपराधहरुमा खुलेआम सहभागिता जनाएर नेतृत्व गरिरहेका थिए त्यति बेला म महसुस गर्न सक्छु कि म कुन हदसम्मको निकम्मा समाजमा “मान्छे मान्छे एउटै हो फरक किन भो“ भन्दै बेफ्वाकमा नारा लाइरहेको रहेछ ।
कथित तल्लो जात भएर स्व घोषित माथिल्लो जातको व्यक्ति सँग प्रेम गरेकै भरमा हत्या गरिनुले समाज अझै पनि कहाँ नीर अल्झिएको छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कहिले सामाजिक रुपमा प्रयोगमा आउने किरिया घरमा किरिया पुत्रिलाई बस्न दिइन्न, कथित तल्लो जात भएकै भरमा । यस्तो समाचार पढ्दै गर्दा लाग्छ नेपालीको वर्ग छुट्ट्याइएका छन । यो बर्गको नेपालीले यो गर्न पाउने र त्यो वर्गले यो गर्न नपाउने भनेर । खुलेआम लाहछाप लाउन मात्र बाँकी छ । जातिय आधारलाई नै लिएर घटेका यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरुले कुन हदसम्मको सामाजिक दुरी र हिंसा पैदा गर्न सक्छ त्यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।
यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यस्ता विगतमा घटेका कैयौं घटनाहरु होलान् जुन सायद कहिले बाहिर आएनन्, कति लुकाइए, कति कानुनी रुपमा अघि बढाइएन र बढी हालेपनि मिलापत्रको नाममा पीडितका आफन्तहरुलाई डर धम्की र लालच दिएर भित्र भित्रै गुमनाम पारिए । चेतनास्तरमा वृद्धि नभएसम्म र एक अर्काको अस्तित्व स्विकार नभएसम्म यस्ता घटनाहरु दोहोरिन्छन्, तेहेरिन्छ्न र बारम्बार घटिरहन्छन् । अस्तित्वको लागि नामको पछाडी जोडिएको थरको कारणले नै उसैको अस्तित्व नै नष्ट पार्न सक्ने यो चिज “जात“ यति बलवान् कसरी भयो त ? म ठम्याउन सक्दिंन । तर यहि बलवान् कहलिएको कुराले मानिसमा बाँकी भएको मानवतालाई कसरी कमजोर बनाउँदै छ म बुझ्न सक्छु ।
यति पढेपछि यदि हामी फेरि फलाना जातले गर्दा यस्तो घटना भयो ढिस्कना जातले गर्दा यस्तो भयो भनेर एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप लाउँछौ भने हामी पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउँने छौं । सायद हामी कोही चाहदैनौं कि भोलि कुनै नेपालीको हत्या होस् चाहे त्यो कथित तल्लो जातको होस् या त माथिल्लो । मानिसले आफुलाई महान बनाउन जबसम्म यस्ता निच कार्य गर्न छोड्दैन तबसम्म यो अपराधको सिलसिला रोकिने वाला छैन । त्यसैले आत्मसमिक्षा गरौं, हामिले जातकै कारण कसैलाई घृणा वा अपहेलना गरेका त छैनौं ?
एकै घरमा ३ जनामा कोरोना संक्रमण